Elago W5 Mira inoshandura yedu Apple Tarisa mu Game Game | IPhone nhau
Nguva zhinji isu tinorumbidza fungidziro yakaratidzirwa nevakawanda vanogadzira paunenge uchigadzira zvinoshandiswa kana mitambo. Asi dunhu iri handiro rega rinopa maawa mazhinji kugadzira zvigadzirwa zvepakutanga, nekuti vagadziri vezvinhu vanoitawo, uye muenzaniso wakanaka ndivo vakomana vanobva kuElago.
Makore mashoma apfuura, vakomana veElago vakatanga rutsigiro kubhadharisa yedu Apple Tarisa izvo yakashandura Apple Watch yedu ikava Macintosh. Kubva parizvino ivo vatanga zvigadzirwa zvakasiyana, izvo zvakakwezva vashoma kutariswa, zvirinani kusvika zvino, sezvo vachangotanga danho nyowani. Elago W5 iyo inoshandura yedu Apple Tarisa mu Game Game.
Elago W5 dumba inoshanda nemhando dzese dzeApple WatchKusanganisira iyo Series 4, inowirirana nehusiku modhi uye inosanganisira kucheka kuisa iyo Apple Watch charger (isina kuiswa). Rutsigiro urwu rwakagadzirwa nesilicone, iyo inogadzirisa zvakare chishandiso kumusoro kuchidzivirira kufamba.
Iyo Elago W5 inomira inowanikwa mumavara mana: tsvuku, indigo, nhema uye grey, kunyangwe panguva ino isu tichingogona chete kutenga rutsigiro urwu mune grey uye nhema kuburikidza ne webhusaiti yekugadzira, ye $ 15,99, asi zvinoenderana nezvinovimbisa, mamwe ese mavara achave achiwanikwa mumazuva mashoma.
Asi iyi kambani haina kutarisa chete pakuvhura zvitsigiro kushandura iyo Apple Watch pane mamwe madhiraivha uchiroja, sezvo vachitibvumidzawo chinja yedu iPhone 6, 6s, 7 uye 8 kuita Macinstosh, ine fomati yakafanana chaizvo neiyo inopihwa nerutsigiro rwekambani imwe chete asi yeApple Watch.
Ikozvino yeKisimusi yava kusvika, kana iwe uchitsvaga chipo chepakutanga, mabhaji akasiyana ekuchaja ayo Elago anotipa, vangave iri zano rakakura rekufunga nezvaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Elago W5 Mira inoshandura yedu Apple Tarisa kuita Game Boy